कुष्ठरोगका बारे भ्रम हटाउने सामान्य प्रश्नउत्तर
मुख्य पृष्ठस्वास्थ्यकुष्ठरोगका बारे भ्रम हटाउने सामान्य प्रश्नउत्तर
विराटनगर/धेरै पाप गरेका कारण कुष्ठरोग लाग्ने र यो रोग लागेका पापी हुन् भन्नेजस्ता अनेकौँ भ्रम समाजमा व्याप्त छ ।
कुष्ठरोग मानव जातिमा हजारौँ वर्ष पहिलेदेखि देखापरेको सङ्क्रमण हो । जुन नियमित औषधि प्रयोगबाट निको हुन्छ । यो अन्य रोगजस्तो खतरनाक सरुवा रोग नभए पनि यसबाट मानिसका शरीरमा उत्पन्न हुने असामान्य अवस्थाका कारण पराम्परागत रुपमा रोगलाई पूर्वजन्मको पापका रुपमा लिने गरिन्थ्यो । यो रोगप्रति नकारात्मक सोचाइका कारण रोगीलाई सामाजमा बहिस्कारसमेत गरिन्थ्यो ।
पछिल्ला दिनमा कुष्ठरोगीप्रति हुने गरेको भेदभावमा कमी आए पनि यस्तो भेदभाव पूर्णरुपमा अन्त्य भने हुन सकेको छैन । कुष्ठरोगका बारेमा केही गलत धारणा छन् जसकारण समाजमा भ्रम फैलिने क्रम जारी छ । रोगका बारे सामान्य प्रश्न र उत्तरले भ्रम हटाई तथ्य बुझ्न सकिन्छ ।
कुष्ठरोग एकदम सङ्क्रामक रोग हो ? के सङ्क्रमितको छेउमा बस्दा पनि रोग सर्छ ?
सङ्क्रमित व्यक्तिको नजिकको सम्पर्कले कुष्ठरोग सार्ने हुँदा यो रोग त्यति धेरै सङ्क्रामक मानिँदैन । सङ्क्रमित व्यक्तिसँग हात मिलाउने, अँगालो हाल्ने वा छेउमा बसेर वा खाना खाने समयमा टेबलमा छेउमा बसेर सङ्क्रमण सर्दैन । कुष्ठरोगी गर्भवती आमाबाट जन्मने शिशुमा पनि सर्दैन । कुष्ठरोग सङ्क्रमित व्यक्तिले सास फेर्दा, बोल्दा, हाच्छ्युँ गर्दा वा खोक्दा निस्कने मसिना कण वा थोपाहरूको माध्यमबाट सर्छ । साथै, प्रतिरक्षा प्रणालीले ब्याक्टेरियाहरूसँग लड्न सक्ने हुँदा सम्पर्कमा आए पनि ९५ प्रतिशत वयस्कलाई रोग नलाग्न सक्छ ।
के कुष्ठरोगले गर्दा हात र खुट्टाका औँला खस्न सक्छन् ?
हात र खुट्टाका औँला कुष्ठरोगको कारणले खस्दैनन् । कुष्ठरोग लाग्ने ब्याक्टेरियाले औँलाका स्नायुहरूमा आक्रमण गर्छ र केही महसुस नहुने बनाउन सक्छ । जसकारण हात खुट्टामा भएको घाउ वा जलेको भागमा ध्यान नजान सक्छ, जसले सङ्क्रमण र स्थायी क्षति निम्त्याउन सक्छ र अन्तमा शरीरले हात र खुट्टाका औँलालाई पुनः अवशोषित गर्न सक्छ । यो उपचार नगरिएको रोगको गम्भीर चरणमा हुन्छ ।
कुष्ठरोग सङ्क्रमितले सङ्क्रमण कति समयसम्म सार्न सक्छ ?
एन्टिबायोटिकको उपचार सुरू गरेको केही दिनपछि नै व्यक्ति सङ्क्रामक हुँदैन अर्थात् उसले रोग सार्न सक्दैन । तर, सङ्क्रमण पूर्ण निको पार्न र पुनः रोग दोहोरिन नदिन उपचार निर्धारितरूपमा समाप्त गर्नुपर्ने हुन्छ (जसमा दुई वर्षसम्म लाग्न सक्छ) ।
के कुष्ठरोग लागेपछि निको हुन्छ ? यसको कुनै उपचार छ ?
समयमा डाक्टरकोमा गएर उपचार गरेमा कुष्ठरोग निको हुन्छ । समयमा एन्टिबायोटिक उपचारले कुष्ठरोग निम्त्याउने ब्याक्टेरियालाई मार्छ, रोग निको पार्छ र शरीरमा हुनसक्ने अन्य क्षतिलाई पनि रोक्न मद्दत गर्छ ।
के कुष्ठरोगीलाई स्वस्थ मानिसहरूबाट टाढा राख्न विशेष घरमा बस्न आवश्यक हुन्छ ?
एन्टिबायोटिकको उपचार गरिएका कुष्ठरोगी आफ्नो परिवार र साथीहरूमाझ सामान्य जीवन बिताउन सक्छन् । साथै, काम वा स्कुलमा जानसमेत जारी राख्न सक्छन् ।